🛏️ Hoyga | Booqo Hultsfred
Sida sariir waayo-aragnimo cajiib ah!
Bogga hore » 🛏️ Hoyga
Hoteel, hoteel, aqal, B&B ama xero - iyadoo aan loo eegayn meesha iyo sida aad u rabto inaad madaxaaga u nasato habeenkii, waxaa jira hoyga sannadka oo dhan oo ku habboon dhadhankaaga iyo xiisahaaga. Naftaada ula dhaqan usbuuca xiisaha badan ee leh heerka ugu sareeya ama teendho ka dhig mid ka mid ah kaamamkeenna wanaagsan ama dabiicadda - annaga oo si wanaagsan noola seexan karna wax alla wixii aad doorato!
Meel ka baxsan bartamaha Målilla waxaa ku taal Villa Karllösa. Hudheelka waxa uu ku yaalaa badhtanka dabiciga ee dhul kayn ah oo cajiib ah. Waxay bixisaa qolal raaxo leh iyo casri ah, oo dhawaan la cusboonaysiiyay
Fiskebodarna - Stora Hammarsjöområdet waxay ku taal meel qiyaastii 10 km galbeed ka xigta Hultsfred, qiyaastii 25 daqiiqo Vimmerby. Aaggu waa goob dabiici iyo kalluumeysi lagu ilaaliyo oo ay ku jiraan ilaa 30
Stenkulla waa aqal qoys oo leh aragtiyo haro ku taal aag dabiici ah oo qurux badan. Qiyaastii 10 km galbeed Hultsfred waxaa ku yaal aagga ilaalinta iyo ilaalinta kalluumeysiga Stora Hammarsjöområdet. Aag dabeecad cidla ah leh
Aqal qoys oo leh aragtiyo haro ku taal aag dabiici ah oo qurux badan. Qiyaastii 10 km galbeed Hultsfred waxaa ku yaal aagga ilaalinta iyo ilaalinta kalluumeysiga Stora Hammarsjöområdet. Aag leh dabeecad cidla ah oo casuuma
Aqal qoys oo leh haro qulqulaya oo ay ku jiraan jetty iyo doon. Qiyaastii 10 km galbeed Hultsfred waxaa ku yaalo aagga ilaalinta iyo ilaalinta kalluumeysiga - Stora Hammarsjöområdet. Aag dabeecad cidla ah leh
Hagadal qolkiisa habeennimo
Qollo habeenkii la seexdo oo leh afar qof. Aqallada yaryar ee 10 mitir laba jibbaaran oo ku habboon joogitaanka habeennimada. Aqallada yar yar waxay ku yaalliin aag deyr ah oo ka dambeeya xarunta. Mid
Hotell Dacke waa hudheelka qoyska ee ku yaal bartamaha magaalada Virserum. Hoteelka agtiisa waa goob weyn oo baabuurta la dhigto. U dhawaanshaha kaynta iyo harada labadaba. Makhaayada hudheelka
Hoteel ku yaal bartamaha Hultsfed. 25 sariirood oo ka kooban laba qol, qolal jiif iyo qolal qoys. Jiko cusub oo casri ah oo loogu talagalay is-u-adeegsiga qolka cuntada la wadaago. Roob wadaag ah, WC, musqusha naafada ah iyo
Hoteelka M Hotellilla & Restaurant
Målilla Hotell waa hudheel yar oo leh makhaayad. Qadada maanta, la carte, pizza iyo saladh ayaa halkan lagu bixiyaa. Makhaayada waxay leedahay xuquuq buuxda. Waxaa jira 40
Kireyso aqal ku yaal jasiiraddaada.Waxaa kufiican adiga oo raadinaya nabad iyo xasillooni. Sidoo kale ku noolow jasiiraddaada gaarka u ah aqal yar
Aqal qoys oo leh haro qulqulaya oo ay ku jiraan jetty iyo doon. Qiyaastii 10 km galbeed Hultsfred waxaa ku yaalo aagga ilaalinta iyo ilaalinta kalluumeysiga Stora Hammarsjöområdet. Aag dabeecad cidla ah oo casuuma
Halkaan waxaad ku wada nooshahay raqiis iyo raaxo labadaba, waxaad u dhowdahay labada Smalspåret, Astrid Lindgren World, Virserums Konsthall iyo howlo kale oo dhowr ah. Hoy leh
Huteelkan raaxada leh, ee qoysku maamulo wuxuu kaliya 50 mitir u jiraa Xarunta Tareenka ee Hultsfred oo ku taal Småland. Laga bilaabo hudheelka waxaad ku leedahay muuqaal ku dhow harada Hulingen. Dhammaantood shaqsi ahaan
Hoteelka Lönneberga wuxuu ku yaal duleedka Emil Lönneberga. Guri hoteelka Lönneberga wuxuu leeyahay adeeg wanaagsan, khibrado dabiici ah iyo waxqabadyo da 'kasta leh. Hoteelku wuxuu leeyahay 55 sariirood. Qolalka
Qeybta woqooyi ee Hultsfred waxaa ku yaalo beerta Kloster. Baadiyaha laakiin masaafada u jirta ilaa dukaanka raashinka, aagga dabaasha, wadada cidhiidhiga ah iyo meelaha socodka ee quruxda badan. Halkan waxaad ka kireysan kartaa qol, aqal